Halgan iyo Hagardaamo: Taariikh Nololeed Cabdulaahi Yusuf
Halgan iyo Hagardaamo: Taariikh Nololeed Cabdulaahi Yusuf W/Q Axmed Faarax Gooje
Feb 11, 2012 Waxa aan fursad u helay in aan akhriyo nuqul ka mid ah buugga ay dhowaan soo saartay Shirkadda Scansom, uuna qoray madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Hor & ahaato waxa aan mahad uga jeedinayaa Cabdullaahi in uu maray waddo aanay Soomaalida siyaasiyiinteedu inta badani aanay hore u budlin, oo ah in uu waayihiisii wax ka qoray. Baravo!
Haddaan u galo tan buugga “la qorye maxaa laga dheefay?”. Buuggu waxa uu si baaxad leh laakiin qabyo ah u soo koobayaa waayihii Cabdullaahi & noloshiisii oo midabbo badan leh. Waxa uu nooga bilaabayaa meel uu ku magacaabay Birta Dheer oo degmada Garowe u dhow, uuna qoraagu sheegay in uu ku dhashay sannadkii 1934kii. Waxa uu ku xijinayaa hab nololeedkii miyiga, sidii uu magaalada ku yimi & qorasho lama filaan ah oo uu ciidamada kaga galay magaalada Gaalkacyo. Waxa uu guud ahaan dulmar & dul-ka-xaadin aan sii qodnayn uu ku sameynayaa waayihii noloshiisa iyo hal’adaygiisii haaminta hoggaamiyanimo oo aan fursado lagu neefsadaayi u kala dhexeyn. Waxa uu na tusinayaa nin karmeednimadiisii, himil ku dheggiisii & sida uu ugu soo halgamay wixii uu nolosha ka rabey, yaraantiisii ilaa imika oo uu cirroole noqday. Jillaafooyin badan oo inta badan in la rumeysto kuu diidaya, laakiin la garan karo in wax badani ka jiraan ayuu horteenna soo dhigayaa.
Buuggu uma eka mid la soo tifaftiray. Wuu isku dhex daadsan yahay oo waxa aad arkaysaa meelo badan oo kala horreeya oo ay ahayd in inta dib loo eego sida ay isku leeyihiin la iskugu xijiyo. Waxa kaa hor imanayo saddarro isku mid ah oo si hawtal hamagnimo ah baalal badan ugu yaal, oo aad garanayso in aan laga ilduufin ee fudayd dartii looga tegey. Taswiirta dusha ku dheggani waa Allow iga gaarsii & wax kama jiraan kumana ayan habboonayn in ay sida ay u muuqato ahaato, oo taasi waa ay bilic tirtay buugga. Marka dhan walba laga eego waxa kuu soo baxaysa in buugga aan loo daabicin sidii uu mudnaa ee fudayd, dulqaad la’aan iyo malaha ka gaarsii lacagi ha ka soo maaxdee darteed uun loo daabacay, maaddaama loo xiise qabey buug noociisa oo kale ah, qoraagana aad looga sugayey bal waayo aragnimadiisa gaamurtey in wax laga kororsado.